” မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား … “
” မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား … ”
(၁၃). အမ်ားတကာမွာအလြန္ပူေလာင္ေနသည့္ ေက်ာက္ခဲ ေက်ာက္စရစ္သဲျပင္မ်ားတြင္ ဖိနပ္ျဖင့္သာသြားလာ၍ရေသာ ေနရာမ်ား တြင္လည္း ဆရာေတာ္မွာ ဗလာေျချဖင့္သာ ၾကြခ်ီေတာ္မူျခင္း။
(၁၄). ေရႊ ၊ေငြ၊ ရတနာ အ၀တ္အစား အသံုးအေဆာင္ အစားအစာမ်ားအားလံုး ႏွေျမာတြန္႔တိုျခင္းမရွိဘဲ လူအမ်ားသို႔ဒါန ေပးလွဴျခင္း။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ အာဏာရွိစဥ္က ဆရာေတာ္ကုိ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၿပီး ေငြသားအေျမာက္အမ်ား လွဴဒါန္းခဲ႔ေပမယ့္ အဲဒီအလွဴခံ ရရွိေငြေတြ အားလုံးကုိ ဒကာ၊ ဒကာမေတြကုိ ျပန္စြန္႔ႀကဲလွဴ လုိက္ပါတယ္ ဆိုတာေတြ ျပည္သူေတြ ပါးစပ္ဖ်ား ေျပာစမတ္ ျဖစ္ၾကရတယ္။
ဆရာေတာ္အား သွ်မ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စည္းရုံးေရးတရားေဟာျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္ေရး တရားေဟာျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ဟုုဆုုိကာ ယခင္အစုိးရမွ မတရားစြပ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ႏွစ္ အလည္ပုိင္းတြင္ ဆရာေတာ္အား ဖမ္းဆီးရန္ ႀကံစည္လာသျဖင္႔ ဒကာ၊ဒကာမ မ်ား၏ အသနားခံ ေလွ်ာက္ထားမူေၾကာင္႔ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေခတၱ ေရွာင္တိမ္းၾကြခ်ီရာမွ ျပန္လည္ ျပည္ဝင္ခြင္႔ မေပးေတာ့ဘဲ ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ထားစဲ ျဖစ္သျဖင့္ ခ်က္ေၾကြဇာတိ သွ်မ္းျပည္သုိ႔ မျပန္ႏုိင္ဘဲ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌သာ သီတင္:းသုံး ေနထုိင္ေတာ္မူခဲ႕သည္။
မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဥာဏသံ၀ရသည္ (၃)ႏွစ္ ကာလတိုင္တိုင္ ဂူပိတ္ တရားက်င့္ႀကံအားထုတ္ေတာ္မူသည္။ထို့ေျကာင့္ဆံေတာ္မ်ားႏွင့္ မုတ္ဆိတ္၊ ႏွဳတ္ခမ္းေမႊးမ်ား ရွည္လ်ားေနလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ဂူကထြက္လာအၿပီးမွာေတာ့ ဆံေတာ္မ်ား ရိတ္ပယ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ဆရာေတာ္သည္ ဂူပိတ္တရားက်င့္ေနစဥ္အတြင္း သစ္သီးဆြမ္းသာ ဘုန္းေပးသည္ဟုသိရပါသည္။ ဆရာေတာ္အား ဖူးေမွ်ာ္ရန္ႏွင့္ တရားနာယူႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သွ်မ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘက္မွ ဆရာေတာ္အား ၾကည္ညိဳၾကသူမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ရွိရာ သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကသည္မွာ လူဦးေရ ေထာင္ ေသာင္းမက ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Credit ; မ​ေနာမယဂ်ာနယ္​
” မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ ထူးခြားချက်များ … ”
(၁) ငယ်စဉ်ကတည်းကစပြီး သက်သတ်လွတ်ဘုဉ်းပေးခြင်း။
(၃) လူသူကင်းမဲ့သည့် တောတောင်အတွင်းရှိ ဂူများတွင် တစ်ပါးတည်းမကြောက် မ ရွံ့တရားအား ထုတ်ခြင်း။
(၄) ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး စာပေအမျိုးမျိုး သင်ယူခြင်းမပြုဘဲ အလိုလိုတတ်မြောက်နေခြင်း။
(၅) မတ်တတ်အနေအထားဖြင့် ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင် မလှုပ်မရှားပဲ တစ်ဆက်တည်းကျင့်ကြံနိုင်ခြင်း။
(၆) .ထိုင်လျှက် အနေအထားဖြင့်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင် တစ်ထိုင်တည်းတရားအားထုတ်နိုင်ခြင်း။
(၇) .၀ါတွင်းသုံးလအတွင်းဂူ(သို့) တောတောင်တစ်နေရာရာတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်တရားထိုင်ခြင်း။
(၈) .၀ါတွင်းသုံးလ ဂူအောင်းနေစဉ် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးခြင်းမရှိဘဲ သစ်သီး၊သစ်ဥ၊ သစ်ဖုများကိုသာ အဟာရ အဖြစ်မှီဝဲခြင်း။
(၉). ၀ါတွင်းသုံးလ ကာလအတွင်း အမြဲတမ်းဝစီပိတ်ကျင့်ကြံခြင်း။
(၁၀). လူ၊နတ်၊သတ္တဝါတို့အား သွန်သင်ဆုံးမသြဝါဒစကားကို တရားတော်များနာပွားနေခြင်းမှ အလိုလို ပေါ်ပေါက်လာခြင်း။
(၁၁). လူ၊နတ်၊သတ္တဝါအားလုံး အဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲမျှှမျှတတ မေတ္တာထား ဆက်ဆံခြင်း။
(၁၂). အများတကာမှာ အလွန်ချမ်းနေပြီး ဖိနပ်၊ ခြေအိတ် အပြည့်အစုံနှင့် သွားလာနေထိုင် သော်လည်း ဆရာတော်မှာ ဗလာခြေဖြင့်ကြွ တော်မူခြင်း။
(၁၃). အများတကာမှာအလွန်ပူလောင်နေသည့် ကျောက်ခဲ ကျောက်စရစ်သဲပြင်များတွင် ဖိနပ်ဖြင့်သာသွားလာ၍ရသော နေရာများ တွင်လည်း ဆရာတော်မှာ ဗလာခြေဖြင့်သာ ကြွချီတော်မူခြင်း။
(၁၄). ရွှေ ၊ငွေ၊ ရတနာ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင် အစားအစာများအားလုံး နှမြောတွန့်တိုခြင်းမရှိဘဲ လူအများသို့ဒါန ပေးလှူခြင်း။
(၁၅).မရေမတွက်နိုင်သော သာသနိက အဆောက်အဦး၊ စေတီ၊ ပုထိုးတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း တို့တွင်ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၆). ရပ်နီးရပ်ဝေး မည်သည့်နိုင်ငံ၊မည်သည့်နေရာဋ္ဌာနသို့မဆို အဓိဋ္ဌါန်ပြုပါက အခက်အခဲမရှိ ကြွရောက်တော်မူနိုင်ခြင်း။
(၁၇). မိမိ၏အတိတ်ဘဝ အဆက်ဆက်ကို သိတော်မူခြင်း။
(၁၈). မိမိ၏ အနာဂတ်ကို ကြိုတင်သိတော်မူခြင်း။
(၂၂).သီလ၊သမာဓိဂုဏ်ကြောင့် အဆိပ်ရှိသတ္တဝါများ အကိုက်ခံရခြင်းမရှိခြင်း။
(၂၃). ကိုယ်ခန္ဓာမကြီးမသေး၊ မနိမ့်မမြင့်၊ မဝမပိန်၊ အသံံသြဇာရှိခြင်း။ လူအများက သူထက်ငါဖူး မြော်လိုခြင်း၊ တစ်ကြိမ်ထက်မက လှူဒါန်းလိုခြင်း၊ တရားနာပြီးရင်းထပ်မံနာလိုခြင်း၊ သတင်းကြားရုံဖြင့် ဖူးမြော်လိုစိတ် အလိုလိုပေါ်ပေါက်ခြင်း။
(၂၄). မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လောနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဘူတန်နိုင်ငံတို့မှ ဆရာတော်များကဘွဲ့တံဆိပ် ဆက်ကပ်ခြင်းကို ခံရခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံသိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် အာဏာရှိစဉ်က ဆရာတော်ကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ပြီး ငွေသားအမြောက်အများ လှူဒါန်းခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအလှူခံ ရရှိငွေတွေ အားလုံးကို ဒကာ၊ ဒကာမတွေကို ပြန်စွန့်ကြဲလှူ လိုက်ပါတယ် ဆိုတာတွေ ပြည်သူတွေ ပါးစပ်ဖျား ပြောစမတ် ဖြစ်ကြရတယ်။
ဆရာတော်အား သျှမ်းခေါင်းဆောင်များကို စည်းရုံးရေးတရားဟောခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်ရေး တရားဟောခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဟုုဆုုိကာ ယခင်အစိုးရမှ မတရားစွပ်စွဲမှုများဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်နှစ် အလည်ပိုင်းတွင် ဆရာတော်အား ဖမ်းဆီးရန် ကြံစည်လာသဖြင့် ဒကာ၊ဒကာမ များ၏ အသနားခံ လျှောက်ထားမူကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ခေတ္တ ရှောင်တိမ်းကြွချီရာမှ ပြန်လည် ပြည်ဝင်ခွင့် မပေးတော့ဘဲ ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ထားစဲ ဖြစ်သဖြင့် ချက်ကြွေဇာတိ သျှမ်းပြည်သို့ မပြန်နိုင်ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံ၌သာ သီတင်:းသုံး နေထိုင်တော်မူခဲ့သည်။
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏသံဝရသည် (၃)နှစ် ကာလတိုင်တိုင် ဂူပိတ် တရားကျင့်ကြံအားထုတ်တော်မူသည်။ထို့ကြောင့်ဆံတော်များနှင့် မုတ်ဆိတ်၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးများ ရှည်လျားနေလျှက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပြီး ဂူကထွက်လာအပြီးမှာတော့ ဆံတော်များ ရိတ်ပယ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ဆရာတော်သည် ဂူပိတ်တရားကျင့်နေစဉ်အတွင်း သစ်သီးဆွမ်းသာ ဘုန်းပေးသည်ဟုသိရပါသည်။ ဆရာတော်အား ဖူးမျှော်ရန်နှင့် တရားနာယူနိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်မှ တိုင်းရင်းသားများ အပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘက်မှ ဆရာတော်အား ကြည်ညိုကြသူများသည် ဆရာတော်ရှိရာ သွားရောက် ဖူးမျှော်ကြသည်မှာ လူဦးရေ ထောင် သောင်းမက ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်သည် ငယ်စဉ်ကတည်းက တရားဓမ္မ ကျင့်ကြံ ပွားများအားထုတ်ခြင်း၊ အကျင့်သီလ မြဲမြံမှုရှိခြင်း၊ စေတီပုထိုးများစွာ တည်ထား၍ သာသနာပြုခြင်း တို့ကြောင့် မြန်မာပြည်မှ တိုင်းရင်းသားများ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံမှလည်း ကြည်ညိုကိုးကွယ်သူများ များပြားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
Credit ; မ​နောမယဂျာနယ်​